Home Wararka Xafiiska iyo magaca RW Rooble oo noqday aalad ay ku shaqeeystaan koox...
Xafiiska iyo magaca RW Rooble oo noqday aalad ay ku shaqeeystaan koox & fadeexad ka dhalatay
Xafiiska Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isku badalay aalad iyo xafiis ay ku shaqeeystaan koox gacan saar la leh Ra’iisal Wasaare Rooble. Kooxdaan ayaa waxa ay qoraalo uu ku saxiixan yahay Ra’iisal Wasaare Rooble u kala diray wadamo iyo hay’addo ay ka doonayaan dhaqaale and ganacsi gaar ah.
Kooxdaan ayaa ka kooban 1) Ganacsade Mursal Cabdullahi Kadiye 2) Maxamed Axmed Abtidoon (Abtidoon Yare) iyo Cabdikarin Xuseen Guuleed. Sadaxdaan nin oo haysta ogolaashaha Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa kulumo gaar gaar ah la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan dalalka Kenya, Iiraan iyo Masar. Waxa ay sidii kale magaca Ra’iisal Wasaare ay lacag ku weydiisteen beeralayda ka gacansata Beeraha Khaadka ee dalka Kenya.
Sida MOL loo xaqiijiyay, Mursal Kadiye ayaa u sheegay dadka uu kula kulmay magaca RW Rooble in loo yaqaano magac ajnabi oo ah lagu sheegay Mark. Sida dadka aad u yaqaano MOL ay u sheegeen , Mr. Mark waa nin caan ku ah dalaalnimada dhowr marna lacago uu isbada mariyay maxkamad loogu soo taagay dalka Ingiriirka. Waxa sidoo kale horay loogu soo eedeeyay in uu qayb ka ahaa burcadeedka maraakiibta ku qabsan jiray badaha Soomaaliya.
Sida MOL ay u sheegeen dad xog’ogaal ah, Cabdikarin Guleed ayaa dhowr mar waxa uu khadka taleefanka soo galiyay Ra’iisal Wasaare isaga oo ku jira shirar gaar ah oo uu kula kulmaayay ganacsato iyo siyaasiyiin wadamo kale. Taas oo cadayn u ah in Ra’iisal Waare Rooble uu raali ku yahay in Xafiiskiisa loo isticmaalo dano lacag loogu raadinayo Cabdikarin Guleed.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa iyadana cadeeynayo in RW Rooble loo balan qaaday, laguna heshiiyay in lacag badan magaciisa lagu keeni karo isaga oo qayb weyn ku yeelan doono lacagtaas. Abtidoon Yare ayaa dhankiisa cadeeyay in RW Rooble uu u fashaxay in xafiiskiisa ay sida ay doonaan u istcimaalaan, gaar ahaan meel kastaa oo ay lacag kaga heli karaan.
Warbixin buuxda oo ay heshay MOL ayaa lagu ogaaday in Cabdikarin, Mursal iyo Abtidoon ay lacag gaaraysa $500,000 oo doolar weydiisteen ganacsatada Khaadka ee dalka Kenya iyaga oo u balan qaaday in ay ka soo dhameeynayaan RW Rooble in uu khaadka dib u furo. Arintaan ayaa wax ka dhalatay fadeexad balaaran oo dhaawac weyn gaarsiiyay karaamada iyo sharafka xafiiska Ra’iisal Wasaare Rooble.